Xadiiska Sixiixa | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Xadiiska Sixiixa Muxuu yahay?
Saxiix Luuqadha Carabiga waxaa laga wadaa : Caafimaad. Marka la leeyahay qofkaas ama sheygaas wuu Nabad qabaa waxaa la dhahaa Sixa ayuu ku jiraa. Marka Xadiisku waxuu ka nabad galay cudur kasta oo u keenaya Daciifnimo . Musdhalax ahaan waxaa laga wadaa : Xadiiska laga helo 5ta shardi. Shruuda oo dhan waan sheegi doonaa waana sharixi doonaa InshaAllah.
1. اتصال السند/ Sanadka inuu xidhiidho: Sannad waxaa laga wadaa ragga werinaya Xadiiska kuwaas oo ah sidii silsilad taxan oo midba midka kale uu kasii qaatay. Hadaba Sannadka ama raggas ha xidhiidhaan waxaa laga wadaa, inuu qof welba uu si toos ah uga maqlay qofka kale oo dhahayo waxaan hadalkan ka maqlay hebel.
2. عدالة الرواة/ Dadka werinaya in laga helo Cadalaad: Yacni inuu yahay qof Allah ka cabsada oo fisqigana ka fogaada. Hadaba Culimadu waxay u sameeyeen shuruud Cadaalada waxayna dhaheen.
– Muslim inuu yahay : yacni Qof gaal ah Xadiis lagama qaadanayo.
– Caaqil- Qof waalan Xadiis lagama qaadanayo.
– Fisqig ka nabad galay. Yacni inuusan ahayn mid lagu ogyahay inuu ku dhacay danbiyada waa weyn.
– Muruuah leeyahay: waa inuusan ahayn mid anshax xun
3. ضبط الرواة/ Xifdigiisu inuu sareeyo: Waa inuu yahay qof xifdisan Hadalkan uu sheegayo. Xifdigu waxuu u qeybsamaa 2 nooc. Mid laabta ah iyo mid Kitaab ah
– Kan laabta : Inuu sheegayo meesha uu hadalkan ka maqlay. Oo uu kor ka xifdisanyahay Hadalka iyo ruuxaba. Tusaale inuu dhaho hebel baa hadalkan igu yidhi. Oo sidii uu u maqlay uu usheego.
– Kan Kitaabka: Waa inuu ku qoro Kitaab. Culimaduna waxay fadilaan oo ay amaanaan kan danbe (kan kitaabka yacni).
4. عدم الشذوذ/ waa inuusan lahayn shuduud: Shuduud waxaa laga wadaa la geesmar. Yacni waxaa laga wadaa Xadiiska waxaa werinaya Thiqa (qof lagu kalsoonyahay) laakiinse waxuu ka soo horjeedsaday dad ka sii thiqasan oo looga sii kalsoon yahay.
5. عدم العلة/ Inuusan lahayn Ciilad: Xadiiska waxaa laga yaabaa marka 4taa hore ee shardi laga helo in uu gadaal ka soo baxdo cilad. Ciladaas oo ah mid qarsoon laakiinse dib ka muuqandoonta. Ciladan waxay ahaan karta, inuu tusaale ahaan la ogaado inuusan Xadiisku ahayn mid silsiladiisu xidhiidho ama la ogaado inuu qof la gees maray iwm.
Bukhaari waxuu leeyahay Kitaabkiisa Saxiixa. Waxaa noo waramay Cabdullahi ibnu Yusuf , Waxuuna yidhi waxaa noo waramay Maalik, Isna waxuu ka sii werinaya Ibnu Shihaab , Isna waxuu kasii werinaya Muxamed Ibnu Jubeyr Ibnu Mudhcim, isna Waxuu kasii werinayaa aabihii , Aaabihina Waxuu yidhi waxaan Maqlay Nabiga sc oo akhrinaya Suuratu Dhuur Maqhribka.
Hadaba xadiiskan waa Saxiix sababtoo ah Shuruudii 5ta ahayd wa laga hayaa. Sannadku wuu xidhiidhaa, Culimadan wax werinayana waa wada cadalaad , midna lama gees marin, Ciladna malahn , Xifdigooduna wuu sareeyaa.
Xukumka Xadiiska Saxiixa waa maxay?
Xadiiska saxiixa ku dhaqankiisu waa Waajib ayay dhaheen Culimadu. Qofka Muslimka ahna uma haboona inuu ka tago ku dhaqankiisa.
Maadama aanan la odhan Karin Sannadkaas ayaa ugu saxsan . Ayaa hadana waxaa jira Asaanid la odhan karo kuwaas ayaa ugu saxsan Malaha.
Imaam Zuhuri markuu ka werinayo Saalim , ee uu Saalimna ka werinayo Aaabihii Ibnu Cumar Ibn Khadab < Culima ayaa dhahda waa Sanadka ugu saxsan. Culimada sidaas dhahdana waxaa kamid ah Imaam axmed iyo Isxaaq ibnu Rahawiya.
Ibnu Siiriin markuu ka werinayo Cubeydah, ee uu Cubeydahna ka wernayo Cali Ibnu abii Dhaalib< Culima aya dhaha waa sanadka ugu saxsan . Culimadaasna waxaa kamid ah. Ibnu Madiini iyo Fallaas.
Acmash markuu ka werinayo Ibrahim, ee isna uu ka werinayo Calqama, ee isna ka sii werinayo Cabdullahi Ibnu Mascuud<< Waxaa aaminsan inuu yahay asaxu isnaad Yaxya ibnu Maciin.
Zuhuri markuu ka werinayo Cali ibnu Xuseen, e uu isna ka werinayo aabihii (Xuseen ibnu caliy) ee uu isna ka sii werinayo Cali<< inuu yahay asaxul isnaad waxaa qaba Abiibakar Ibnu abii Sheybah.
Maalik markuu ka werinayo Naafic, ee uu Naaficna ka werinayo Ibnu Cumar<< waxaa aaminsan inuu yahay asaxul isnaad Imam Bukhaari.
Qofkii ugu Horeeyay ee qora Kitaab Saxiix ah?.
Waxuu ahaa Imaam Bukhaari , kadibna Muslim.
Mutafaqun Caleyhi maxaa laga wadaa?
Waxaa laga wadaa Waxaa isla weriyay Muslim iyo Bukhaari.
Wallahu Tacalaa aclaa wa axkam
from → Duruus Yaryar Cilmul Xadiith, Xadiiska Saxiixa
axmed mohamuud permalink	April 27, 2015 6:10 am	Masha allah allaha kheer ha idiinsiyo
Reply	Muhaditha.wordpress.com permalink*	May 27, 2015 2:56 pm	Jzkheyraa walaal